Ch 17 Luke – 2kalluunka
Home / Kitaabka Quduuska ah / Injiilka Luukos / Ch 17 Luke
17:1 Oo isna wuxuu xertiisii ​​ku yidhi: "Waa wax aan macquul fadeexado ma inay dhacaan. Laakiin waa u hoog isaga u kan ay xumaantu ka timaado!
17:2 Waxa ay noqon doontaa si fiican isaga, waayo, haddii looga lalmiyo oo la dhigay luqunta iyo badda lagu tuuro galay, badan u khiyaaneeyaan mid ka mid ah kuwan yaryar.
17:3 Noqo digtoon Naftiinna. Oo haddii walaalkaa ayaa kugu dembaabnay, sixin. Oo haddii uu ka qoomamooday, cafiyaa.
17:4 Oo haddii uu kugu dembaabnay toddoba jeer maalintii, oo toddoba goor maalintii ayaa dib kuu soo noqonnay, oo wuxuu ku yidhi, 'Waan ka xumahay,'Markaas cafi. "
17:5 Oo Rasuulladii Rabbiga ku yidhi, "Rumaysad noo kordhi."
17:6 Laakiin Rabbigu wuxuu ku yidhi: "Haddii aad leedahay rumaysad iniin khardal oo iniino, waxaadba oran kartaa in geedkan sukamin, Ruq, iyo in la transplanted badda ku tuuraya. 'Oo idin addeeci lahaa.
17:7 Laakiin taas oo aad ka mid ah, kiinnee baa leh addoon ama quudinta xoolaha, odhan lahaa isaga u, sida uu soo noqonayay duurka ka, Kaalay in si deg deg ah; cunto u fadhiiso,'
17:8 oo ma dhihi lahaa inuu: Diyaari waxaan casho; naftaada iyo Wasiirka guntan igu, halka wax cunayo oo cabbayo; oo waxyaalahaas ka dib, waxaad cuni doontaan, oo wax cab?'
17:9 Mahdiya anoo addoonkaaga ah in uu noqon lahaa, wixii uu isaga ku amray in ay sameeyaan?
17:10 Uma maleynayo. Sidaas oo kale, marka aad waxaas oo dhan waa in lagu baray si aad u samaysay, intaasoo aad tidhaahdaan: 'Waxaannu nahay addoommadii aan waxtar lahayn. Waxaan sidaan u sameeyey waxa aynu samaynay waa. '"
17:11 Oo waxaa dhacday in, halka uu u safraya Yeruusaalem, dhex Samaariya iyo Galili ayuu maray.
17:12 Oo markuu galay magaalo leh qaarkood, toban nin oo baras qabay la kulmay, kolkaasay waxay istaageen meel fog.
17:13 Markaasay codkoodii kor u qaadeen, oo wuxuu ku yidhi, "Ciise, Macallimow, qaataan noo naxariiso. "
17:14 Oo markuu arkay iyaga, ayuu yiri, "Tag, istusa wadaaddada. "Waxaa dhacay, intay sii socdeen, inay daahirsameen.
17:15 Markaasaa midkood wuxuu ku, markii uu arkay in la nadiifiyey, ku soo laabtay, Ilaah weynaynaya cod weyn.
17:16 Oo isna wuxuu la kulmi hoos cagihiisa ugu hor dhacay, mahad. Markaasaa waxaa taas ka mid ahaa reer Samaariya ah.
17:17 Oo jawaab, Ciise wuxuu ku yidhi: "Tobankii miyaanay daahirinayo? Oo sidaas daraaddeed meeye sagaalkii?
17:18 Ka mid ahaa ma laga heli soo laaban doono iyo inay Ilaah ammaanaan, shisheeyahan maahee?"
17:19 Oo isna wuxuu ku yidhi isagii: "Kac, bixi. Waayo, Rumaysadkaaga ayaa ku badbaadiyey. "
17:20 Kaddib waxa uu Farrisiintii goortay weydiiyeen: "Markii boqortooyadii Ilaah ma imaan?"Oo jawaab, Wuxuu iyaga ku yidhi: "Boqortooyada Ilaah gaaray burash.
17:21 Oo sidaas daraaddeed, miyaanay odhanaynin,, Bal eeg, Halkan waa,'Ama' Bal eeg, waxaa jiro. 'Waayo, bal eeg, boqortooyada Ilaah waa idinku dhex jirtaa. "
17:22 Oo isna wuxuu xertiisii ​​ku yidhi: "Waxaa iman doona wakhti goortaad dooni doontaan inaad aragtaan maalin maalmaha ka mid ah ayaa Wiilka Aadanahu, iyo ma waxa aad ku arki doonaa.
17:23 Oo waxaa la odhan doonaa inaad, Bal eeg, waxa uu halkan waa,'Iyo' Bal eeg, halkaas ayuu ku yahay. 'Ha dooran inuu tago, oo ha u raaco.
17:24 Waayo, sida hillaacu inta samada ka hoosaysa oo u ifiyo wax kasta oo samada ka hooseeya, sidaas oo kale ayuu Wiilka Aadanahuna ahaan doonaa maalintiisa.
17:25 Laakiin marka hore waa inuu wax badan ku xanuunsado oo uu qarniganu diido by.
17:26 Iyo sidii ay u dhacday in wakhtigii Nuux, sidaas oo kale ayay noqon doontaa maalmaha Wiilka Aadanaha.
17:27 Waxay wax ku cunayeen oo wax u cabbayeen; waxay ka Haween iyo guur baa la siin, ilaa maalintii Nuux uu doonnida galay,. Oo daadkii yimid oo wada baabbi'iyey.
17:28 Waxa ay noqon doontaa mid ah wixii ka dhacay maalmihii Luud. Waxay wax ku cunayeen oo wax u cabbayeen; wax bayna iibsan iyo iibinta; ay beerto iyo dhismaha.
17:29 Markaasuu, on maalintii Luud ka tageen Sodom, ayay dab iyo baaruud cirka kaga soo daateen, oo isna wuu wada baabbi'iyey.
17:30 Sida laga soo xigtay inuu waxaas oo dhan, sidaasay ahaan doontaa maalinta Wiilka Aadanahu soo muuqan doono.
17:31 Saacaddaas qudheeda, ku alla kii doonaa Ku xigeenka Masaarida, alaabtiisu guriga la, Kii guri fuushanuna yaanu u soo dagno si aad u qaadato. Oo ku alla kii noqon doontaa duurka, Sidoo kale, yaanu dib ugu noqon.
17:32 Naagtii Luud Xusuusnow.
17:33 Ku alla kii ayaa waxay dooneen si uu naftiisa u badbaadiyo, waa lumin doonaa; oo ku alla kii ayaa waxaa laga badiyay, soo celiyo nolol doonaa.
17:34 Waxaan idinku leeyahay,, Habeenkaas, waxaa jiri doona laba nin ayaa sariir. Mid waa la qaadi doonaa, oo kalena waa laga tegi doonaa ka dambeeya.
17:35 Laba noqon doonaa grindstone ka wada. Mid waa la qaadi doonaa, oo kalena waa laga tegi doonaa ka dambeeya. Laba noqon doontaa duurka. Mid waa la qaadi doonaa, oo kalena waa laga tegi doonaa ka dambeeya. "
17:36 Wax ka qabashada, Waxay ku yidhaahdeen, "Halkee, Sayidow,?"
17:37 Oo isna wuxuu ku yidhi iyagii, "Meel kasta oo jidhka ka mid noqon doona, in sidoo kale meel, ayaa gorgorraduna isugu ururi doonaan. "